Fampirantiana tanterahina mandritra ny 5 andro ary iandrasana mpitsidika hatrany amin’ny 10000. Fiaraha-mientan’ny fikambanan’ny mpiasan’ny Indostria (FIMPII) ity noho ny fahatsapana fa tena latsa-danja ny vokatra vita Malagasy mihoatra ireo entana mitobaka avy any ivelany . Izany no mahatonga izao hetsika fanandratana ny vokatra vita Malagasy izao ary nanasana ireo mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony te hitodika amin’ny fandraharahana sy ireo sehatra tsy miankina. Nanambara ny filohan’ny FIMPI, Andriamatoa Randrianantenaina Raherison fa ny akora hafarana avy any ivelany ampiasaina eto Madagasikara dia tena vidina lafo noho ny fitotongan’ny sandam-bola Malagasy. Miakatra hatrany koa, hoy izy ny vidin-tsolika izay ampiasaina eny anivon’ny Indostria ka mahakofona tanteraka ny fandraharahana atao. Rehefa izay dia tsy maintsy mampiakatra ny vidim-bokatra amin’ny tsenany i Madagasikara hanenjehana ny masonkarena ka mahatonga ny vokatra vahiny ho tena mahazo vahana. Vahaolana voalohany sy akaiky indrindra aloha dia ny fanentanana ny Malagasy mba hanjifa ny vokatra eto an-toerana hampiroboroboana ny Indostria sy ny sehatra tsy miankina. Manana anjara toerana lehibe ihany koa ny fitondram-panjakana ny amin’ny politika atao hiarovana ny vokatra Malagasy sy ny fananganana paikady matotra hiadivana amin’ireo entana vahiny mitobaka marobe ireo.